I-China Play Panel Production neFektri | Izinsimbi Zokudlala zeHaiberi
Imidlalo yephaneli iyithuluzi lokudlala le-eshalofini lokuzikhethela lendawo yokudlala. Le midlalo yephaneli yokudala yenziwa ngokhuni oluqinile nopende onemvelo, oqinile futhi kulula ukuwulondolozela. Imidlalo yephaneli yenzelwe ukusebenzisa amakhono ezingane okubukwa, okubonakalayo, nokuhlola futhi amathoyizi amahle ezinsana nezasenkulisa.
Iphaneli yokudlala yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme futhi eziqinile, futhi izinto zokwakha kanye nokwakheka kuhambisana ngokuphelele namazinga okuphepha. Idizayini yemidlalo ye-gameplay inengqondo ukunciphisa umthwalo wokusebenza kwakho.
Esedlule: I-Mini Bakery
Olandelayo: Isithombe Esithambile Sezimbobo